काठमाडौँ, २ माघ (रासस) : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित रहन भवनसंहिता पालना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । बीसौँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा मूल
अनेरास्ववियु नर्सरी हो, सिमाना मिचिँदा जुरमुराउनुपर्छ : खनाल
काठमाडौं, २ माघ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अनेरास्ववियुलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नर्सरीको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटिद्धारा आयोजित दुईदिने उपत्यका स्तरीय
राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे आयोग र दलका नेतावीच छलफल
काठमाडौँ, २ माघ । निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यक्रम र प्रक्रियाका बारेमा पाँच राजनीतिक दलका नेतालाई अवगत गराएको छ । आयोगद्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा
‘कांग्रेसका ७५ वर्ष पुगेकाहरुलाई मिठो खुवाएर विदा गर्न चाहन्छौं’ काठमाडौं, २ माघ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता चन्द्र भण्डारीले मुलुक विधि अनुसार चल्न नसके हतियार हाबी हुने भन्दै त्यसतर्फ
सुवास नेम्बाङको प्रश्न : देउवाले के गर्न खोजेको हो ?
काठमाडौं, २ माघ । नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरेर के गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र राष्ट्रिय
ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ : अमनलाल मोदी
२ माघ, काठमाण्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले एमाले–माओवादीबिचको एकताका बारेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता
राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी र झलनाथको दौड, सभामुखमा ओनसरी र सुवासचन्द्र, कसले मार्ला बाजी ?
२ माघ, काठमाण्डौ । संघीय संसदले पूर्णता पाएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ । संविधानतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यावधि संघीय संसद र प्रदेशसभाका सांसदले
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र आज तोकिने
काठमाडौं २ माघ । सरकारले मंगलबार सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्नुका साथै प्रदेशको कार्य
संविधानले नै सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ, फागुनमा वाम नेतृत्वको सरकार बन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
लमजुङ, १ माघ (रासस) : पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले फागुनमा वाम नेतृत्वको सरकार गठन हुने बताउनुभएको छ । लमजुङ सदरमुकाम बँेसीशहरमा आयोजित घले ल्होसार कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– “फागुनको तेस्रो साताभित्र नयाँ
कांग्रेसका चार नेताका चार कुरा, तत्काल बैठक बोलाउन देउवालाई दबाब
काठमाडौं, १ माघ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज भेटेरै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले तत्काल केन्द्रिय कार्य समिति बैठक बोलाउन दबाब दिएका छन् । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल
सुमार्गीले पत्रकार सम्मेलनमै सिरोहियामाथि लगाए गम्भिर आरोप, अरु के-के भने ? हेर्नुहोस् पूरा आरोपहरु
काठमाडौं, १ माघ । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका मालिक मालिक कैलाश सिरोहियालाई ब्यालमेकर भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सोमबार वानेश्वरस्थित मुक्तिश्री टावरमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुमार्गीले
जाति समुदायको साझा पर्व माघी : महत्व र मनाउने तरिका (भिडियोसहित)
१ माघ, काठमाण्डौ । माघ १ गते नेपालका अधिकांश जाति समुदायको साझा पर्वहरुको संगम हो । विशेष गरि हिन्दू, बुद्धमार्गी र किराँत समुदायको साझा पर्वको दिन हो माघ १ अर्थात
ताइवानले अमेरिकासँग लडाकु विमान खरिद गर्न लागेपछि चीनले कडा चेतावनी दिएको छ । एफ-१६ विमानको
कास्की क्षेत्र नं २ : उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसले खटायो प्रतिनिधि
काठमाडौं, ५ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीले कास्की क्षेत्र नं २ को
अमेरिकाले रुससँग राख्यो आणविक हतियार सम्बन्धि नयाँ सन्धीको प्रस्ताव
अमेरिकाले रुससँग नयाँ आणविक सन्धीमा जोड दिएको छ । उसले दुइपक्षीय सहमति भएमा पाँच बर्ष